Mpamatsy sokajy fanadiovana ra ary mpanamboatra sokajy fanadiovan-dra
Hemodialyzer misy habaka goavambe (flux avo)
Amin'ny hemodialysis, ny dialyzer dia miasa toy ny voa voajanahary ary manolo ny fiasan'ny taova voajanahary.
Ny rà dia mikoriana amin'ny fibra 20 000 tena tsara, fantatra amin'ny hoe capillaries, mifangaro ao anaty fantsom-plastika 30 sentimetatra ny halavany.
Ny capillaries dia vita amin'ny Polysulfone (PS) na Polyethersulfone (PES), plastika manokana misy fanasiana miavaka sy toetra mifanentana amin'ny hemo.
Ny pores ao anaty capillaries dia manivana ireo poizina metabolika sy rano be loatra avy amin'ny ra ary mamoaka azy ireo amin'ny vatana miaraka amin'ny tsiranoka dialyse.
Ny sela sy ny proteinina tena ilaina dia mitoetra ao anaty ra. Dialyzers dia ampiasaina indray mandeha any amin'ny ankamaroan'ny firenena indostrialy.
Ny fampiharana ara-pahasalamana ny hemodialyzer hollow azo ampiasaina dia azo zaraina ho andiany roa: Flux avo sy Flux ambany.
Hemodialyzer misy habaka goavambe (flux ambany)
Ny sivana dialysate ultrapure dia ampiasaina amin'ny sivana bakteria sy pyrogen
Nampiasaina niaraka tamin'ny fitaovana hemodialysis novokarin'i Fresenius
Ny fitsipika miasa dia ny fanohanana ny membrane fibre hollow hanodinana ny dialyse
Fitaovana hemodialisis sy manomana dialyse no mahafeno ny fepetra takiana.
Ny Dialysate dia tokony hosoloina aorian'ny fitsaboana 12 herinandro na 100.
Boriborintany ra hemodialisis azo ampiasaina amin'ny fampiasana tokana
Ny Circuits Hemodialysis Sterile ho an'ny fampiasana tokana dia mifandray mivantana amin'ny ran'ilay marary ary ampiasaina mandritra ny fotoana fohy mandritra ny dimy ora. Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny klinika, miaraka amin'ny dialyzer sy dialyzer, ary miasa ho toy ny lalan-dra amin'ny fitsaboana hemodialysis. Ny tsipika arterialy dia manaisotra ny ràn'ny marary amin'ny vatana, ary ny lalan-dra dia mamerina ilay ra "voatsabo" hiverina amin'ilay marary.
Fahadiovana avo lenta, tsy fanalefahana.
Famokarana fenitra ara-pahasalamana, fanaraha-maso bakteria henjana, endotoxin ary atiny mavesatra, mampihena ny fivontosan'ny dialyse.
Kalitao miorina, fifantohana marina amin'ny elektrolit, miantoka ny fiarovana ny fampiasana klinika ary manatsara ny kalitaon'ny dialyse.
Fantsona fantsona ho an'ny HDF
Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny fizotran'ny fanadiovana rà klinika ho toy ny fantsom-panafody ho an'ny hemodiafiltration sy ny fitsaboana hemofiltration ary ny famoahana ranoka soloina.
Izy io dia ampiasaina amin'ny hemodiafiltration sy hemodiafiltration. Ny asany dia ny fitaterana ny tsiranoka soloina ampiasaina amin'ny fitsaboana
Karazan-tsakafo hafa misy fantsona fantsona ho an'ny HDF dia mety amin'ny milina dialyse samy hafa.
Afaka manampy fanafody sy fampiasana hafa
Izy io dia matetika misy fantsom-pandrefesana, fantsom-pifandraisana ary fantsona paompy, ary ampiasaina amin'ny hemodiafiltration sy hemodiafiltration.
SXG-YA, SXG-YB, SXJ-YA, SXJ-YB, SXS-YA ary SXS-YB
Kitapo marary irery, fonosana marary irery (fonosana tsara),
Kitapo marary roa, fonosana marary-droa (fonosana tsara)
Kit ho an'ny mpitsabo mpanampy amin'ny dialyse
Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny fomba fitaizana be antitra amin'ny fitsaboana hemodialisis. izy io dia mazàna dia miteraka plastika plastika, lamba famaohana tsy misy tenona, lambam-pandriana iodeine, fanampiana amin'ny bandy, tampon-tsitrapo ho an'ny fampiasana ara-pahasalamana, fonon-tànana vita amin'ny fingotra ho an'ny fampiasana ara-pahasalamana, kasety adhesive ho an'ny fampiasana ara-pitsaboana, lambam-baravarana, paosy am-pandriana, gauze steril ary alikaola swabs.
Ny fampihenana ny enta-mavesatry ny mpitsabo ary ny fanatsarana ny fahombiazan'ny mpiasa ara-pitsaboana.
Fitaovana tsara kalitao voafantina, maodely marobe tsy azo atao sy fanamendrehana mifanaraka amin'ny fahazarana mampiasa klinika.
Modely sy tsipiriany: Type A (fototra), Type B (natokana), Type C (natokana), Type D (multi-function), Type E (catheter kit)
Fampiasana tokana AV Fistula Needle Set
Fampiasana tokana AV. Ny fistula Needle Sets dia ampiasaina amin'ny rà mandriaka sy ny rafi-pamokarana rà hanangonana ra avy amin'ny vatan'olombelona ary hampita ny ra na ny singa voadio miverina amin'ny vatan'olombelona. Ny AV Fistula Needle Sets dia nampiasaina tao amin'ny toeram-pitsaboana an-trano sy tany ivelany nandritra ny am-polony taona maro. Izy io dia vokatra matotra be mpampiasa amin'ny toeram-pitsaboana ho an'ny dialyom-paharetan'ny marary.
Vovoka hemodialisis (mifandray amin'ny masinina)
Tubing napetraka ho hemodialysis